Si aan isula fahanno macnaha wadaniyadda waxaa lagama maarmaan ah inaan kolka hore wadajir isula eegno macnaha muwaadin. Qeexmooyinka care-edeg ee ereyga muwaadin waxaa kamida;
Waxaan idinla wadaageynaa team ahaan kulankeena ugu horeeyay ee aan sameynay oo ahaa sidee dalka wax ugu qaban karnaa maxaaase shaqsiyan dalka wax ugu tari karnaaa
Astaanta mideysa dad meel gaar ah kuwada noolAqoonsiga cadeeya xubinimada dad dal ku kunoolDabarka isku xira dowladda iyo dadkeeda
Dhalad waxaa la yiraahdaa qofka ciid ahaan dhulka u-dhashay, muwaadinkuna waa qof ama gudaha dalkaas ku dhasha amaba sifo sharci ah ku qaatay aqoonsiga muwaannimo ee dalka. Xeer ahaanna dhamaan xubnaha dhalashada dalka haystaa waajibaad isku mid ah ayaa saaran, mudnaan isku mid ahna way ku leeyihiin dalkooda.
Xorriyad isu-socod iyo mid deganaanshiyo oo leh nolol fiicanXorriyad fikir, mid dhaqan iyo mid diimeedXorriyad fagaare, mid isu-tag, iyo mid dhaqdhaqaaqXorriyad ka caagan adoonsinimo, iyo maxbuusnimo dow-darro ahXuquuq la xiriirta difaaca noloshooda, gaar ahaan cadow banaanka kaga iman karaXuquuq la xiriirta awooddooda xeer bedel (weliba si-dhakhso ah)Xuquuq shakhsiyadeed, mid siyaasadeed iyo mid dhaqaalebaXuquuq la xiriirta dhaqan-wadaagga, iyo ka qayb galka siyaasaddaXuquuq la xiriirta lahaanshiyaha hanti gaar ahaaneedXuquuq la xiriirta shaqada iyo helitaanka adeegyada dadweyneXuquuq la xiriirta helitaanka deegaan caafimaad ahaan dheelli-tiranSinaan dadweyne weliba dhanka siyaasadda……….
Adeecidda xeerarka dalkaTix-gelinta mudnaanta dadka kaleBixinta canshuurahaAhaanshiyaha qof war gashan, gaar ahaan arrimaha dadweyneCodeynta iyo ka qayb galka arrimaha bulshadaDaba-galidda hoggaamada siyaasadeed, iyo saraakiisha dowliga ahU-dagaalamidda dalka ciidan ahaan, markii laguu baahdoTaageeridda qoyskaaga, diintaada, bulshadaada iyo qarankaagaIlaalinta qarannimada.
Taariikhdu mawada xusto muwaadiniinta ee wadaniyiinta ayey wada xustaa…
Wadanigu waa; Muwaadinka dalkiisa iyo dadkiisa markii ay maradu ka feydmato u ceeb asturaMuwaadinka xumaha dadkiisa iyo dalkiisa aanan cadowgooda u kashifin
Weligii wadanigu waa same-fishe, raja-dhimasho ma yaqaan, oo waxaa mar walba u muuqda iftiin ayan muwaadiniintu wada arag. Si-kastoo talada dadkiisa ay u gacan-maroojiyaan bah tuuganimo iyo talo-keliyeysi ku dhisan, qaddiyaddiisa dal iyo dad jacaylnimo marnaba ma dhimato, xataa haddii mooryaanta taladoodu ay dheeraato.